Jery (An-Tsary) Ireo Vakok’i Syria Sasantsasany Potika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2017 14:07 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Português, Ελληνικά, عربي, Español, Français, 繁體中文, Italiano, polski, English
Norandranin'ny fianakaviana niampita taonarivo ny tantaran'i Syria. Notondroina ho faritany romana teo ambany fifehezan'i Pompey Lehibe tamin'ny taona 64 talohan'i Kristy, ary teo ambany zioga Ottoman tamin'ny fanjakan'i Sultan Selim I taonjato 16 taty aoriana, tamin'ny taona 1516, nizaka ny fanitaram-panjakan'ny goavan'izao tontolo izao ny firenena. Namela vakoka ara-maritrano sy ara-kolontsaina isan-karazany izay tafiditra tsikelikely tao amin'ny vakoky ny firenena ireo ampira nifaninana ny hanjaka eo amin'ny faritra. Zo azo hatramin'ny nahaterahana ho an'ny Syriana izany mitsapa ny tsiron'ny zavamanitra ao amin'ny Souqs ao Aleppo, na mitazana ny vatosoa dia ny teathra romana ao Bosra.
Efa fanta-daza amin'ny tantarany mahavalalanina ireo toerana manan-tantara ao Syria. Saingy mety tsy hahazo izany fitantarana fanao efa hatry ny ela izany ny Syriana rahatrizay, sy izao tontolo izao amin'ny ankapobeny tamin'ny fanapotehana azy ireo nandritra ny ady an-trano maharitra enin-taona sy nahafatesana olona mihoatra ny 400.000 ary namindra olona mihoatra ny atsasaky ny mponina ao Syria.
Ny Tanàna Fahagolan'i Aleppo, izay tafiditra ao anatin'ny Vakoka Manerantanin'ny UNESCO tamin'ny taona 1986, teo amin'ny tantara dia foibem-barotra ihaonan'ny lalana avy any Andrefana sy Atsinanana, tsara toerana anelanelan'ny ranomasina mediteranea sy Mezôpôtamia. Ny fiavahany eo amin'ny tantara dia noho ny toerany mamarana ny iray amin'ny Lalan'ny Lasoà.
Manoloana ny fianjeran'ny faritra atsinanan'ny tanàna tamin'izany fotoana ho eo am-pelatanan'ny fitondran'i Assad sy ny mpiara-dia taminy tamin'ny volana Desambra, nilaza ny tolony hanisa ny maty isan'andro ny mpikatroka tao an-toerana.
Araka ny Ivontoeran'ny Firenena Mikambana Momba ny Fanazarana sy ny Fikarohana (UNITAR), dia toeram-bakoka mitotaly 22 ao amin'ny tanàna no potika ary 48 no nahasimbana be dia be tamin'ny taona 2013.
Sary indray mipika ny souq tamin'ny taona 2011 via Flickr. (CC BY 2.0)
Sary indray mipika ny Souq tamin'ny taona 2012. Loharanon-tsary: AMC, nahazoana alalana.
Tamin'ny faramparan'ny taona 2012, nisy fifanandrinana mamaivay teo amin'ny fitondrana sy ny Tafika Syriana Afaka (FSA) tao anatiny sy manodidina ny Souq. Nanafika ny toerana manantantara tamin'ny balantafondro ny fitondrana, dia navelany ho may tao io.
Rehefa nanombana ny fahapotehana ny tao amin'ny UNITAR dia nahita fa potika tanteraka ny ankamaroan'ny tranombarotra, fa nisy Aleppine iray be fanantenana naneho hevitra tao amin'ny The Telegraph tamin'ny taona 2012 nanao hoe:
Nopihan'ny mpitsangatsangana iray tamin'ny taona 2010, via Wikimedia.
Tsy mitsahatry ny nodarohan‘ny fitondran'i Assad baomba ity manda ankavoana ity nanomboka tamin'ny taona 2012 ary fipoahana baomba tamin'ny Jolay 2015 no niteraka ny faharavan'ny rindriny.
Nanoratra i Ibn al-Shihna mpahay tantaran'i Aleppo tamin'ny taonjato faha-15: “Nifaninana tamin'ny an'i Damaskosy teo amin'ny fandravahana, loko ary ny môzaika ny Moskea Kanton'i Aleppo.”
Jery akaiky amin'ny tokotany mahasondriana tamin'ny taona 2009, via Flickr.
Hoy i Helga Seeden, profesoran'ny arkeolojia ao amin'ny Oniversite Amerikana ao Beirota, tamin'ny Associated Press:
Ity moskea manatantara ity no nifantohan'ny fihetsiketsehana manohitra ny fitondrana ao Daraa sady nampiantrano hetsi-panoherana maro izay nisedra ny setrasetran'ny herim-piarovan'ny governemanta.
Tamin'ny volana jona ny angidimbin'ny fitondrana Syriana no nandatsaka baombam-barika efatra nasiana ranoka mandoro tamin'ny moskea, nandoro ny ilany avaratra ao aminy.
Ao an-tokotanin'ity tanàna manantantara manankarena ao amin'ny tanàna ao atsimo ity no miorina ny teathra Romana niorina tamin'ny taonjato faharoa, ireo moskea islamika tranainy indrindra mbola tavela ary fanorenana kristiana rava ihany koa. Ny tanàna fahagolan'i Bosra, voasoratra ho Vakoka Manerantany UNESCO tamin'ny taona 1980 ary nampidirina lisitra ao amin'ny Vakoka Manerantany Tandindonin-Doza tamin'ny taona 2013, dia efa renivohitry ny faritanin'i Arabia Romana sady toeram-piatoan'ny valalamanjohy mizotra ho any Lameka.
Teathra Romana ao Bosra nopihana tamin'ny taona 2011, via Wikimedia.
Nodarohan'ny angidimbin'ny fitondrana tamin'ny taona 2015 baomba ity toerana ara-kolontsaina manandanja ity, ka niteraka fahasimbana goavana tamin'ilay manda an-kavoana tranainy.
Ilay mandalapan'ny vanim-potoana antenantenany ahatazanana ny endriky ny manodidina. Creative commons
Crac des Chevaliers, midika hoe ‘Mandalapan'ny Mpitantsabatra [Mpitaingi-tsoavaly]’, dia mandalapan'ny mpanao kroazady ao amin'ny faritanin'i Homs ao Syria. Toerana iray hafa Vakoka Manerantanin'i UNESCO, ity no noheverina ho iray amin'ny mandalapan'ny vanimpotoana antenantenany eto ambonin'ny tany voatsimbina indrindra. Naorin'ny Holafitry ny Masindahy Joanin'i Jerosalema nanomboka ny taona 1142 ka hatramin'ny taona 1271 ity mandalapa ity ary nasian'ny “Mamelòka” fanitarana nandritra ny faramparan'ny taonjato faha-13.
Niaritra fahasimbana goavana ny mandalapa, indrindra fa ao amin'ny Lasapelin'ny Kroazady, noho ny daroka tafondro sy ny fanafihana an'habakabaka nataon'ny fitondrana Syriana.
Hatramin'ny nahazoan'ny ISIS ny toerana dia nopotehin-dry zareo ny tsangambato sy tempoly maro dia maro tao aminy.
Ilay moskea marevaka tamin'ny taona 2005, via Wikimedia.
Tamin'ny taona 2013, nidaroka ity moskea manatantara ity ny miaramilan'i Assad, ka nandrava ny mausolée ao aminy. Lasa voadaroka hatrany ilay moska nanomboka tamin'izany fotoana izany.